देखिएका यी दृष्यहरु, सेक्सटोय अर्थात नेपाली भाषामा भन्दा यौन खेलौना । नाम सुन्दा अनि देख्दा नेपाली समाजमा सजिलै खुल्न नसकिने विषय हो सेक्सटोय ।युरोपीयन र विकसित देशहरुमा निकै फराकिलो व्यापार रहेको सेक्सटोयको दायरा पछिल्लो समय विस्तारै नेपाली समाजमा पनि बढेको देखिएको छ । नेपालमा पनि सेक्सटोय प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ ।सामान्य रुपमा सेक्सका विषयमा खुल्न नसक्ने नेपाली समाज …
हास्यकलाकार जितु नेपालकी श्रीमती मुनालाई पितृ शोक!
काठमाडौँ, चर्चित हास्य कलाकार जितु नेपालको ससुरा अर्थात् उनकी श्रीमती मुना नेपालका बुवाको बुधबार निधन भएको छ । उनको आज बिहान पशुपति आर्यघाटमा अन्त्यष्टि गरिएको छ । ७० वर्षिय श्रिकृष्ण राउतलाई लामो समय देखि अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटल उपचार गराईरहेको थियो । उनलाई ब्रेन ह्याम्रेज भएको पत्ता लागेपछि अप्रेशन गरिएको थियो । अपरेशन सफल भएपछि उनि घरमै अराम गर्दै आइरहेका थिए। …
अन्तरवार्तामा सबैजसो कलाकारहरुले आफूलाई ‘भर्ससटाइल’ भन्न रुचाउँछन् । चलचित्रका नायक हुन वा नायिका आफू जुनसुकै भूमिकामा पनि अभिनय गर्न सक्ने दावी गर्छन् । धेरै कलाकारहरुले आफूलाई शहरीया जीवनशैलीदेखि गाउँले पात्रको भूमिका दुवैमा उतिकै फिट बनाउन सक्ने दावी गर्छन् । तर अहिलेकी चर्चित नायिका साम्राज्ञीलाई भने शहरीया पात्रको भूमिकामा मात्र अभिनय गर्न मन लाग्छ । उनलाई ‘गाउँले’ चरित्रमा अभिनय गर्ने रुची …
मेरो घर गोरखाको ताप्ले गाविसको वडा नं ३ मा पर्छ । अहिले काठमाडौंको बानियाँटारमा बस्छु ।मलाई रोजगारीका लागि विदेश जाने इच्छा थिएन । तर परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पैसा कमाउन २००९ अगस्ट ९ मा दुबई गएँ ।काठमाडौको मुनड्रप्स म्यानपावरमा एकाउन्टेन्टका लागि आफ्नो डकुमेन्ट छोडेको थिएँ । पढाईतिर ब्यस्त भएकाले मैले चासो पनि दिइन उताबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन ।एक …
बलिउडको चर्चा गर्ने हो भने, त्यहाँ निर्माण भएका चलचित्रको गीतको पनि प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ । बलिउडमा चलचित्रका गीतको पनि आफ्नै किसिमको महत्व रहने गर्दछ । गीत निर्माणमा संगीतकार र गायकले मिहिनेत पनि निकै गर्ने गरेका छन् । आफ्नो मिहिनेतले करोडौ दिलको ढुकढुकी बन्न सफल ति गायक गायिका जो एक गीतका लाथिग बलिउड स्टार सरह फिस लिने गर्दछन् । मीका सिंह …
टिभी शोकी यी चर्चित ‘किन्नर बुहारी’ बनिन् ट्रोल, यस्तो छ वास्तविकता!
हिन्दी टेलिभिजन शोको चर्चित सिरियल अभिनेत्री रुबीना दिलैक एक पटक फेरि चर्चामा आएकी छिन् । यस पटक उनि आफ्नो बोल्ड फोटोको कारण चर्चामा आएकी हुन् ।रुबीनाले सोशल मीडियामा शेयर गरेको एक बोल्ड फोटोको कारण उनि मानिसहरुको निशानामा परेकी छिन् । आफ्नो बोल्ड फोटोलाई रुबीनाले इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा शेयर गरेकी छिन् । शेयर गरेको यस फोटोमा उनका फ्लोअर्सहरुले नराम्रो कमेन्टहरु गरेका छन् …
यी चर्चित सुपरस्टारको चलचित्रले यूट्यूबमा पार गर्यो १० करोड भ्युज
पछिल्लो समय यूट्यूबमा दक्षिण भारतको चलचित्रले धमाका मच्चाउदै गएको छ । यस चलचित्रको हिन्दी भर्जनलाई दर्शकहरुले निकै मन् पराएका छन्। र यो चलचित्रले नयाँ रेकर्ड पनि बनाएको छ । चलचित्रको सफलतालाई मध्यनजर गरेर बलिउडमा पनि धेरै चलचित्रको रीमेक बन्ने गर्दछ । साउथको सुपरस्टार अल्लु अर्जुनको चलचित्र ‘दुवदा जगन्नाधम’ (Duvvada Jagannadham) ले पनि यस्तै धमाका मच्चाएको छ । उनको तेलुगु चलचित्र …
एजेन्सी । दाह्री काट्न र कपाल मुण्ड्याउनका लागि ब्लेड प्रयोग गरिन्छ । पत्तावाला ब्लेडको एक विशेष डिजाइन याद गर्नुभएको छ ? बीचको भाग उबडखाबड हुन्छ नि !ब्लेड बनाउने यति धेरै कम्पनीहरू छन् तर सबैको डिजाइन एउटै खालको किन हुन्छ ? यसका पछाडि जिलेट कम्पनीको हात छ । उसैले ब्लेड बनाउन शुरु गरेको हो ।जिलेट कम्पनीका संस्थापक किङ क्याम्प जिलेटले सन् …